देशको राजधानी न्युरोडको मुहार फेरिने भएको छ । काठमाडौं महानगर, प्रदेश–३ सरकार र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा न्युरोड गेटको सौन्दर्यीकरण गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि गुरुयोजनासमेत तयार भइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका सहरी योजना आयोगले गुरुयोजना तयार पारेको हो ।
यी हाम्रा अमूल्य निधिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु हाम्रो दायित्व हो । त्यसैले, हामी इतिहास नमर्ने गरी आधुनिकीकरणको अभियानमा लागेका छौँ ।’ उनले न्युरोड गेट यसअघि तीनपटक पुनर्निर्माण भएको बताए । अब भने न्युरोड गेटलाई परम्परा झल्किने गरी पुनर्निर्माण गर्ने र न्युरोडलाई सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा चिनाउने गरी अभियान अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
न्युरोड नेपालको सहरी विकासको इतिहासमै एक महत्व्पूर्ण क्षेत्र हो । १९९० सालको महाभूकम्पअघिसम्म विभिन्न पोखरी र पाखो ठाउँका रूपमा रहेको यो ठाउँमा भूकम्पपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेरले पिच सडक निर्माण गरेका थिए । जसको खास नाम जुद्ध सडक हो । तर, त्यो काठमाडौंको सबैभन्दा नयाँ सडक भएकाले पछि त्यसलाई ‘नयाँ सडक, न्युरोड वा न्हू सतक’ भन्न थालियो । नयाँ सडक नेपालकै पहिलो पिच सडक हो । न्युरोडसँगै रहेको भूगोल पार्कचाहिँ नेपालकै पहिलो व्यवस्थित पार्क हो, त्यसको ठीक पछाडि नेपालकै पहिलो बैंक नेपाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय छ ।
प्रतिनिधिससभा सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भन्छन् ‘काठमाडौं महानगरको भित्री सहर कला, संस्कृति र परम्पराले भरिपूर्ण छ । हामी यसको संरक्षण र संवद्र्धनमा लागेका छौँ ।’
यस्तै, आगलागी हुँदा जमिनबाट पानी निकालेर फाल्ने पहिलो फायर हाइड्रेन्ड पनि न्युरोडमै छ । विदेशबाट सामान आयात गरी बिक्री गर्ने पहिलो सप्लायर्स पसल छाता भण्डार न्युरोडबाटै सुरु गरिएको थियो । मोटरसाइकल भाडामा दिने र त्यहीँबाट अहिलेको जस्तो ‘टुटल र पठाओ’ सेवा प्रदान गर्ने कार्य पनि न्युरोडबाटै सुरु भएको थियो । ‘यति धेरै इतिहास बोकेको ठाउँलाई व्यवस्थित गर्नु र संरक्षित गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व पनि हो, अहिले महानगरपालिका त्यसैमा जुटेको हो,’ वडाध्यक्ष महर्जनले भने, ‘हामी नयाँ सडकलाई पुनर्जीवन दिन लागिरहेका छौँ । यो व्यापारिक हब हो । पर्यटकलाई घुम्नका लागि आकर्षक ठाउँ बनाउनेछौँ ।’
सहरी योजना आयोगले तयार गरेको गुरुयोजनाअनुसार न्युरोड गेटको माथिल्लो भागमा अष्टमातृकाका मूर्ति राखिनेछ । गेटको दायाँ–बायाँ नगर रक्षकका रूपमा गणेश र कुमारको मूर्ति स्थापना हुनेछन् । गुरुयोजनामा फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ । रेलिङलाई पनि नेवाः संस्कृति झल्किने गरी व्यवस्थित गर्ने तयारी भएको सहरी योजना आयोगले जनाएको छ । रेलिङमा जीवित देवी कुमारीको प्रतीक स्वरूप तेस्रो आँखा र काष्ठमण्डपको चित्र अंकित गरिनेछ ।
‘गुरुयोजनामा परम्परागत इँटा चिकं अप्पा र दाछी अप्पा वा ढुंगा बिछ्याएर प्राचीन स्वरूप झल्किने गरी पैदलमार्ग बनाउने गुरुयोजना बनाएका छौँ,’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘नागरिकमैत्री फुटपाथका साथैसो क्षेत्रका विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने, ठाउँ–ठाउँमा सडकबत्ती धुनियाँ शैलीको पोलमा राख्नेलगायतका विषयसमेत गुरुयोजनामा समावेश छन् । भूगोलपार्कलाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको छ ।
काठमाडौं–९ का प्रदेश सांसद डा. अजयक्रान्ति शाक्यले न्युरोडको सौन्दर्यीकरणका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारको पहलमा एक करोड बजेट छुट्याएको बताए । त्यसबाहेकको रकम महानगरपालिकाले छुट्याएको छ । आवश्यक परे थप बजेट विनियोजन गराउने उनको भनाइ छ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत दरबार स्क्वायरआसपासको यो क्षेत्र भित्री सहरको हेरिटेज व्यापारको केन्द्रका रूपमा समेत विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । नयाँ सडक सौन्दर्यीकरण अभियानले भित्री सहरलाई पैदलमार्गका रूपमा विकास गर्न सकिने र वातावरण प्रदूषणलाई पनि कम गर्दै प्राचीन सम्पदा–संस्कृतिलाई जीवन्तता दिन थप सहयोग पुग्ने शाक्यको भनाइ छ ।
कठघरामा केशव स्थापित : एमाले फुटाउँदा मैले मात्रै २७ करोड उठाएँ
उत्तेजित प्रधानमन्त्री, गैरजिम्मेवार गृहमन्त्री : नेता केसी
पहिचानको संकटमा कांग्रेस
पत्रिका जलाउने गिरोह अझै पक्राउ परेन, पत्रिका जलाएकोमा चौतर्फी बिरोध
बुर्का र कालो साडी
लोकतन्त्रका हाइप्रोफाइल भ्रष्टचार !
एकीकृत सूचना प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीका वेथितिमा सुधार ल्याउला ?